शब्दकोश: August 2013
‘ऊ’ त्यो पात्र हो, जसमा तपाईंको पनि एक अंश हुन सक्छ । अधिक अंश हुन सक्छ ।
तपाईंको एक वा बढी गुण/अवगुण उसमा पाउनु आश्चर्यको कुरा होइन । कारण, ऊ पनि यही सामाजिक उद्योगको उत्पादन हो । ऊ बिग्रेको आलु हो कि दुर्गन्धित प्याज, तपाईं आफूमै नियाल्नुस् उसका सम्पूर्ण सुगन्ध/दुर्गन्ध ।
काठमाडौं उपत्यकाभित्र धेरै गल्ली र चोक छिचोल्न बाँकी छ उसले । ऊ त टुँडिखेलको ठीक बीचको भागमा पनि नउभिएको हुन सक्छ । ललितपुरको एकान्तकुना धाएर कहिल्यै पुगेको छैन ऊ । यदाकदा गाडीमा यात्रा गर्दा बीचमा त्यो ठाउँ पार गर्छ । तर, ऊ आफूलाई हरक्षण एकान्तकुनामा पाउँछ ।
एकान्तकुना कुनै ठाउँ, चोक हो कि मानसिक अवस्था वा रोग ?
उसले खुट्याउन नसकेको तर जाकिइरहेको खाल्डो यही हो । यसको लतले पाकेर उसलाई मलेवा चराले झैं आफ्नै घाउ ठुँग्न मजा लाग्छ । सायद कुनै गुप्त खजाना उत्खनन हुन्छ कि !
’ऊ’ त्यो पात्र हो, जसलाई अर्कै हो भनेर तपाईंले आँखा चिम्लिदिनुभएको छ । यसैले अँध्यारो कायम छ । तपाईंको आँखाभित्र अँध्यारो । मन भनिने विचार हस्याङफस्याङ गर्ने कार्यकक्षमा अँध्यारो । संसारमै अँध्यारो …
Posted by Jotare Dhaiba at Wednesday, August 21, 20132: Comments
Labels: अनुभूति, तस्बिर
खुर्सानी र किताब
मनमौजी भएर बरालिन बानी परेपछि सोझो गोरेटोमा हिंड्न झर्किन्छ मन । एक धर्सो डोरीमा झन् के हिंडोस् !
केही समययता यही दुस्साहसमा घचेटेको छु आफूलाई । सर्कस चलाउने चेष्टा गरेको छु जीवनमा । एक धर्सो डोरीमा पैंतालालाई खन्याइदिएको छु । सिंगो विश्वसँग डिभोर्स गरे झैं एउटा ध्याउन्नमा एकोहोरिन बानी बसाउँदै छु । यसरी एकोहोरिने क्रममा खुला रुपमा विश्वमा कावा खानमा रमाएको सास यस क्रममा निसास्सिंदै छ । ‘यही निसास्सिनु तेरो जीवन हो’ भनेर पढाउँदै छु आफूलाई । केहीबेर सास थुनिएपछिको मुक्त उडान कति स्वर्गीय हुन्छ भनेर आश पनि जगाउँदै छु ।
Posted by Jotare Dhaiba at Wednesday, August 14, 2013 1 : Comments